Ambohimitsimbina : Nisy nandroba ny Radio Soa
(12-02-2018) - Tsy nisy afa-tsy ny latabatra sy ny seza sisa no navelan’ireo olon-dratsy. Lasa avokoa ny fitaovana fampiasa amin’ny onjam-peo : ny « table de mixage », ny solosaina rehetra tao, ny fahitalavitra ary hatramin’ny « casque » aza.
Nisy nandroba ny Radio Soa 96.8 FM, ny alin’ny alakamisy hifoha zoma teo. Raha ny fanazavana azo avy amin’ny tompony dia fotoana fohy taorian’ny fandaharana politika antsoina hoe « Hiaka » no nisehoan’ny fandrobana. Nopoirina ny fanatsofohana fanalahidy dia novohaina ny varavarana ary nobataina izay zaka. Ny fandaharana Hiaka dia mahakasika ny fanadihadiana ny raharaha politika izay mahakasika ny fiainam-pirenena. Ny amin’ny mety ho fanahiana sao misy ifandraisany amin’io fandaharana izay matetika ny miteny mahitsy momba ny tsy mety ataon’ny fitondràna. Nilaza ny tompony fa ny fanadihadiana no hamaritra an’izay. « Aleo aloha handeha ny fanadihadiana izay efa ataon’ny pôlisy, avy eo mivoaka ho azy eo izay mety ho marina mahakasika izay fanahiana izay » raha araka ny fanazavany. Hatramin’ny omaly dia mbola tsy niverina ny onjam-peo ary nanaitra izay mpanaraka azy izany. Tamin’ny alàlan’ny tambajotra sosialy no nampandre ny tompon’andraikitra ary nitantara ny zava-misy.
Omaly kosa anefa dia efa nanomboka nividy ny fitaovana ilaina io farany ary inoana fa tsy ho ela dia hiverina ny fandaharana rehetra. Ao anaty trano mihidy no misy ny « studio » ary misy olon-kafa mipetraka ao anatin’izany. Miompana amin’ny fomba nahavaky ny trano ny fanadihadian’ny polisy, alohan’ny hisamborana izay mety ho ahiahiana tamin’ny halatra. Na izany aza mbola endriky ny tsy fandriam-pahalemana ihany ny zava-nitranga. Ao anaty trano mihidy mbola misy mahavita miditra sy mibata izay nilainy : nanam-potoana izany ny jiolahy.